Lazarus စျေး - အွန်လိုင်း LAZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Lazarus (LAZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Lazarus (LAZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Lazarus ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Lazarus တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Lazarus များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
LazarusLAZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000145LazarusLAZ သို့ ယူရိုEUR€0.000122LazarusLAZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00011LazarusLAZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000131LazarusLAZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0013LazarusLAZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000909LazarusLAZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00318LazarusLAZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000537LazarusLAZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000192LazarusLAZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000201LazarusLAZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00324LazarusLAZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00112LazarusLAZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000766LazarusLAZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0108LazarusLAZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0243LazarusLAZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000198LazarusLAZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000218LazarusLAZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00449LazarusLAZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.001LazarusLAZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0153LazarusLAZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.172LazarusLAZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0559LazarusLAZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0106LazarusLAZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.004
LazarusLAZ သို့ BitcoinBTC0.00000001 LazarusLAZ သို့ EthereumETH0.0000004 LazarusLAZ သို့ LitecoinLTC0.000002 LazarusLAZ သို့ DigitalCashDASH0.000002 LazarusLAZ သို့ MoneroXMR0.000002 LazarusLAZ သို့ NxtNXT0.0116 LazarusLAZ သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 LazarusLAZ သို့ DogecoinDOGE0.0413 LazarusLAZ သို့ ZCashZEC0.000002 LazarusLAZ သို့ BitsharesBTS0.00551 LazarusLAZ သို့ DigiByteDGB0.00559 LazarusLAZ သို့ RippleXRP0.000474 LazarusLAZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000005 LazarusLAZ သို့ PeerCoinPPC0.000485 LazarusLAZ သို့ CraigsCoinCRAIG0.0652 LazarusLAZ သို့ BitstakeXBS0.0061 LazarusLAZ သို့ PayCoinXPY0.0025 LazarusLAZ သို့ ProsperCoinPRC0.018 LazarusLAZ သို့ YbCoinYBC0.00000008 LazarusLAZ သို့ DarkKushDANK0.0459 LazarusLAZ သို့ GiveCoinGIVE0.31 LazarusLAZ သို့ KoboCoinKOBO0.0314 LazarusLAZ သို့ DarkTokenDT0.000133 LazarusLAZ သို့ CETUS CoinCETI0.413
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 19:20:02 +0000.